Samachar Batika || News from Nepal » किन माेटी भन्दा पा’तली केटी बढी मन पराउँछन् त पुरुषहरु ? हेर्नुहोस
किन माेटी भन्दा पा’तली केटी बढी मन पराउँछन् त पुरुषहरु ? हेर्नुहोस
कसैलाई स्लि’म केटीहरू से’क्सी लाग्छन् भने कसैलाई मोटा। यो व्यक्तिपिच्छे फरक पर्ने कुरा हो। पातलो शरीर छि’नेको क’म्मर भएकी युवतीले जो कोहि युवालाई पनि सजिलै आ’कर्षित गर्न सक्दछिन् । सामान्यतया मोटो शरीर भन्दा सरलक्क ज्यानमा भएकी युवती नै युवाहरुको रोजाइमा पर्ने गरेको विभिन्न अध्ययन अनु’सन्धानहरुले पनि पुष्टि गरिसकेको छ ।
‘इभोलुसनरी फिटनेस’ नामक एक उपन्यासमा पुरुषहरुले जिवनसाथी रोज्दा किन पा’तलो शरीरमा बढि ध्यान दिन्छन् भनि लेखिएको पनि छ । पुरुषहरुले पातली युवती बढि राम्री र स्वस्थ हुने पूर्वधारणा बनाएका हुन्छन् र केहि हदसम्म यो साँचो पनि हो । विभिन्न देशहरुमा हुने आकर्षक युवती प्रतियोगितमा युवतीको पातलो शरीरलाइ पहिलो प्राथमिकता दिएर मुल्याङन गर्ने गरिएको छ ।
पुरुषहरुले पा’तली युवती बढि राम्री र स्वस्थ हुने पूर्वधारणा बनाएका हुन्छन् र केहि हदसम्म यो साँचो पनि हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै हेर्ने हो भने युवतीहरुको शरीर इन्डेक्स १९ हुँदा असाध्यै आ’कर्षक हुने रेट गरिएको छ । आदर्श र मोडल हुनको लागि भने बडी माक्स इन्डेक्स २४ देखि २४.८ हुनुपर्ने बताइएको छ । मसिनो शरीरले वास्तविक भन्दा कम उमेर देखाउने भएकाले पनि यस्ता केटीहरु पुरुषहरुलाइ साह्रै मन पर्छन् ।
इन्स्टिच्युट अफ जेनेटिक्स एण्ड डेभलमेन्टल बायोलोजीका अगुवा अ’नुसन्धानकर्ता जोन स्पिकमेनका अनुसार २० वर्ष उमेर पुगेका केटीहरुमा १७ देखि २० बडी माक्स इन्डेक्स मेन्टेन गर्ने हो भने उनिहरुलाइ प्र’जनन सम्बन्धी रोग लाग्ने कम सम्भावना हुन्छ । युरोपियन, अफ्रिकन र एसियन राष्ट्रका युवतीहरुमा परिक्षण गरि हेर्दा यो सत्य साबित भएको छ ।
मोटी केटीहरु कम आकर्षित देखिनुका साथै पुरुषहरुको तुलनामा उनीहरुमा मधुमेह, हृ’दयधात तथा प्रजनन स’म्बन्धी रोगहरु लाग्ने ख’तरा हुने स्पिकम्यान बताउँछन् । आर्कषक देखिने लोभमा अत्ति पातलो शरीर बनाउनुभने प्रा’णघातक हुन सक्ने विज्ञहरु बताउँछन् । स्वदेश नेपाल डटकम बाट।
प्रकाशित मिति ६ जेष्ठ २०७७, मंगलवार १५:५५